Radio Don Bosco - Tsy havela hisy vato mifanongoa
Anisan’ireo asa tananan’olombelona tsara sy mahasondriana ny Tempoly tao Jerosalema tamin’ny andron’i Jesoa, ary voalaza fa tsy mba nahita zavatra tsara teo amin’ny fiainany izay tsy nahita izany. Ambaran’i Jesoa anefa fa ho avy ny andro, ho rava tsy hisy vato mifanongoa eo amin’io toerana nanorenana io Tempoly io, na mafy sy tsara orina izany satria taona maro no nanorenana azy. Tsy natao haharitra ny asan’ny tanantsika olombelona, mandalo ihany ireny. Ny maharitra dia ny ny fiainana ao amin’Andriamanitra. Noho izany tsy tokony hanankina ny fontsika amin’ireny asan’ny tanantsika ireny isika.
Te hahafantatra sahady ny ho fotoana farany isehoan’ny faharavana ireto nanontany an’i Jesoa na koa hoe te hanana tombony amin’ny fahalalana izany. Andriamanitra irery ihany anefa no tokony hahalala izany ; koa raha misy milaza ho mahalala izany dia toy ireo mpaminany sandoka. Ilana fahamalinana sy fahamailoana izany. Tsy tokony haka ny toeran’Adriamanitra. Ny tokony ho toetra ananana eo am-piandrasana ny farany dia ilay voazan’i Jesoa manao hoe : “Miambena sy mivavaha ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora hiavian’ny Zanak’olona”. Noho izany, tsy midika ho fiavian’ny farandro akory ny fisian’ny loza isan-karazany, toy ny aretina na horohoron-tany, satria toa fahita isan’andro ireny. Fa ny fibebahana kosa ilaina iainana isan’andro isan’andro ho entina handavorariana ny fiainam-panahy sy entina mahatoky ny indrafon’Andriamanitra. Fantatr’Andriamanitra fa marefo ny fiainantsika ka nanomanany ny fiainana mandrakizay isika. Io fiainana feno hasambarana sy tsy misy tebiteby io, no hiomanantsika eto an-tany. Fiainana lavorary, tsy hain’ny vava ambara satria tsara lavitra noho ny zava-bitan’ny olombelona. Amen !